Abavelisi bepompo yokushisa ebunzi Abavelisi kunye nabaThengisi- iFektha yaseChina - iQuanzhou waimaoniu Ngenisa kunye noThengiso lweziThunyelo kumazwe angaphandle, Co, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Ukulinganisa ithermometer > Umphambili weqondo lobushushu
Umphambili weqondo lobushushu
Umkhwa wokushisa ubunzi (infrared thermometer) yenzelwe ukulinganisa ubushushu bembonakalo yomzimba wobuntu. Kulula kakhulu kwaye kufanelekile ukuyisebenzisa. Isiphatho sobushushu ebunzini sinokulinganisa ngokuchanekileyo ubushushu kwi-1 yesibini, akukho ndawo ye-laser, siphephe ukonakala komonakalo emehlweni, akukho sidingo sokunxibelelana nolusu lomntu, thintela usulelo lomnqamlezo, umlinganiso weqondo lobushushu elinye, kunye nokujonga umkhuhlane. Ilungele abasebenzisi bosapho, iihotele, amathala eencwadi, amashishini amakhulu kunye namaziko, kwaye inokusetyenziswa ezibhedlele, ezikolweni, emasikweni, kwizikhululo zeenqwelo moya nakwezinye iindawo ezibanzi. Isibhamu sobushushu singanikezelwa nakubasebenzi bezonyango ukuba basisebenzise kwiikliniki.
Ubungakanani (ubude 665 ububanzi buyi-380-ubude bu-610) (iyunithi: mm): iziqwenga ezi-100 / ubunzima be-23KG
Ubungakanani bepakeji yangaphakathi (ubude i-175-ububanzi yi-128-ubude i-60) (iyunithi: mm): isiqwenga esi-1 / ubunzima i-230g
Igama lesiNgesi lesiqhulo lobushushu ebunzini: umpu lobushushu bebunzi
Ubungakanani bompu wentloko: uyilo lwebhentshi lokulinganisa ubushushu bebunzi lomntu
Kusetyenziswa imipu yasebusweni: ezibhedlele, ezikolweni, emasikweni, kwizikhululo zeenqwelomoya
Sebenzisa umphambili wobushushu umpu
1. Umgangatho wobushushu bomntu: Umlinganiselo ochanekileyo wobushushu bomzimba bomntu, uthabathel 'indawo ithemomebhile yendalo yesiqhelo. Abafazi abafuna ukuba nomntwana banokuhlala besebenzisa i-thermometer ye-infrared (umphambili weqondo lokushisa) ukubeka esweni ubushushu basal, ukurekhoda ubushushu bomzimba ngexesha le-ovulation, kwaye bakhethe ixesha elifanelekileyo lokukhulelwa, kwaye banakho nokulinganisa ubushushu ukugweba ukukhulelwa kunye nokunye. ivuliwe.
Ewe, eyona nto ibaluleke kakhulu kukusoloko ujonga ukuba amaqondo obushushu omzimba akaqhelekanga, ukuthintela usulelo lomkhuhlane kunye nokukhusela umkhuhlane weehagu.
2. Ubungakanani bomgangatho wobushushu kulusu: Ukulinganisa ubushushu bomphezulu wolusu lomntu, umzekelo, inokusetyenziselwa ukunqunyulwa kunye nokuphinda kufakwe emzimbeni.
3. Ubungakanani benqanaba lokulinganisa: Ukulinganisa ubushushu bezinto, umzekelo, bunokusetyenziselwa ukulinganisa amaqondo obushushu omphezulu wekomityi yeti.
4. Umlinganiselo wobushushu wolwelo: linganisa ubushushu bolwelo, njengobushushu bamanzi okuhlamba umntwana, kwaye ulinganise ubushushu bamanzi xa umntwana esiya kuhlamba, kwaye engasazixhalabisi ngokuba kubanda okanye kushushu; unokulinganisa ubushushu bamanzi kwibhotile yobisi ukulungiselela ukulungiswa komgubo wobisi lweMana;
5. Ubushushu begumbi bunokulinganiswa:
1. Nceda ufunde imiyalelo ngocoselelo ngaphambi komlinganiso, kwaye ibunzi maligcinwe lomile, kwaye iinwele azifanele ukugubungela umphambili, (nceda wenze umlinganiso kubume bemeko ye-10 â „ƒ -40 â„ ƒ) ukuqinisekisa ukuchaneka komlinganiselo.
Iqondo lobushushu ebunzini lilinganiswe ngokukhawuleza yile mveliso libhekiswa kuphela, kwaye akufuneki lisetyenziswe njengesiseko sonyango. Ukuba ufumanisa ubushushu bomzimba ngokungaqhelekanga, nceda sebenzisa ithermometer yonyango ngomgangatho ongaphezulu.
3. Nceda ukhusele iilensi enovelwano kwaye ucoce ngexesha. Ukuba amaqondo obushushu aguqileyo atshintsha kakhulu ngexesha lokuguqulwa, isixhobo sokulinganisa kufuneka sibekwe kwindawo ukuba sibalwe imizuzu engama-20, sandule ke sisetyenziswe emva kokuba sithe sazinza kubushushu obufikeleleyo ukulinganisa amaxabiso achanekileyo.
Iifayile ezishisayo: Umphambili wobushushu umpu, abaVelisi, abaThengi, iiVenkile eziNinzi, iiFektha, Thenga, China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, Uluhlu lwamaxabiso, ikowuti, I-FDA